म मरे भने मेरो काजक्रियामा तिमी र मेरो भाइ इमान सामेल नहुनु। यो मेरो बिन्ती ! – Molamkhabar
२९ मंसिर २०७७, सोमबार २२:२६
कोरियाका लागि पूर्वराजदुत कमानसिंह लामाको बिहीबार निधन भएको छ । उनी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वसांसद लामा प्रेसर, सुगरसँगै किड्नीको समस्याबाट ग्रसित थिए । उनी पन्ध्र दिनदेखि कोरोना सङ्क्रमित भई उपचाररत थिए ।
काभ्रेका दिग्गज कम्युनिष्ट नेता लामा वि.सं. २०३१ सालमा कमरेड निर्मल लामा नेतृत्वको ने.क.प.(चौम)बाट कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य बनेका थिए । कमरेड लामा २०३५ सालमा अखिल नेपाल युवा संघको केन्द्रीय संस्थापक सदस्य भयो । वि।सं। २०४८ मा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट सांसद बनेका थिए । त्यस्तै २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका थिए ।
२०६३ सालमा पुनःस्थापित संसद सदस्य भएका उनी दक्षिण कोरियाका राजदूत भयो ।
उनले आफ्नो जीवनभर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सम्मिलित भइ सर्वहारा वर्ग तथा उत्पीडित जनताको पक्षमा लडे । वर्गवैरीप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुने लामा पहिचानको आन्दोलनमा समेत उत्तिकै सहभागी भएर नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका थिए ।
लामा केही दिनदेखि पारिवारिक समस्यामा पनि रहेको देखिएका छन् । उनका श्रीमतीसँग मनमुटाव भएको उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटसले प्रष्ट पारेको छ । उनले सामाजिक सञ्जालमा आफू अस्पतालको शैय्यामा रहँदा पनि श्रीमती आफ्नो साथमा नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘यदि कथंकदाचित म मरे भने मेरो काजक्रियामा तिमी र मेरो भाइ इमान सामेल नहुनु।’ उनको यो स्टाटसको न्याय होला या नहोला, तर यसले भने पारिवारिक किचलोको पीडा बोलेको छ ।
यसैगरी नेकपाले शोक वक्तव्य जारी गरेका छन् । जसमा केही कुरा सच्याउनुपर्ने र इतिहास लुकाउने प्रयास गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । निर्मल लामा नेतृत्वको नेकपा (चौम)बाट कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य वि.सं.२०३१ सालमा बनारसबाट भएको जानकारहरुले बताएका छन् । उनलाई विभिन्न व्यक्तिहरुले सामाजिक सञ्जाल र मिडियाबाट श्रद्धाञ्जली दिएका छन् ।
हामी सबैका अग्रज नेता, आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल सह-इन्चार्ज तथा सचिवालय सदस्य लामाप्रति आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपालको संयोजक सुरेश आलेमगर र पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले महासंघको झण्डा ओढाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिइएको थियो ।
त्यस्तै लामाप्रति शुभचिन्तक, शुभेच्छुक संघ संस्था र मित्रहरूले श्रद्धाञ्जली दिएका थिए ।
उनले लेखेका स्टाटस जस्ताको तस्तै
प्रिय, तिमी त उसको परिवार रे, आफ्नो श्रीमतीलाई आफैँले हात लिनुपर्छ रे। वा रे वा! नेताज्यू हातमा हैन मैले शिरमा राखेको थिएँ। ढोंगीहरुले त हातमा भनेर घुँडामा झुण्ड्याउने हो क्यार, जे होस तिम्रा जाल झेल खेती सप्रेको नै छ। ‘सादा जीवन उच्च विचार’का होर्डिङबोर्ड बगैंचा, घरका भित्तामा टाँसेका छौँ, त्यो तिमीलाई कत्तिको सहज लाग्छ कुन्नी? मलाई त हाँडीघोप्टेजस्तो लाग्छ।
त्यसबखत ठूला–ठूला भौगोलिक उथलपुथल भइरहन्थे। एक्कासी गोण्डावना ल्यान्ड दक्षिणी धुर्वसँग छुट्टियो र ३ मिटर उत्तर सर्यो। पृथ्वी बीचमा उसिनेको अण्डाबीचमा फÞुटाएको जस्तो फुट्यो। पृथ्वी दुई भागमा बाँडियो। उत्तरी गोलार्ध पांगिया र दक्षिणी गोलार्ध गोण्डावना ल्यान्ड। यहि घटनामा भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा बर्मुडा ट्रयाङगल बन्यो। त्यो आजपर्यन्त अभेद्य छ। त्यस्तै हामी हाम्रो बर्मुडा ट्रयाङगलमा फसेका छौं।
हामी दुईले मध्यरातमा घाम झुल्किएको फिनल्यान्ड, नर्वेवाट रसस्वदन गर्ने सपना अधुरै रहने भयो। ट्रान्स साइबेरियन ट्रेन चढेर व्लादिभोस्तक जाने,उलान बटोर र ऐतिहासिक गोवी मरुभूमिमा उट चढने सपना अधुरै रहने भयो।
प्रिय, म कोरोनाले लिएर जानको लागि सबै योग्यता पुगेको मान्छे। म अरुले भने मृत्यशय्याबाट भन्थे होला, तर म भन्दिनँ। कोभिडसँग पैंठेजोरी खेल्दैछु। सायद म बाँच्छु पनि होला, मेरा वरपरबाट धेरै गए पनि। तर, म आत्तिन्नँ।
जीवन मरणको यो लडाईंका बेला मेरी श्रीमती मेरो साथ हुन्न भने उसलाई अझै श्रीमती भनिरहनु कत्तिको औचित्यपूर्ण छ? लौ प्रिय गरिखान मनग्ये गरी दिएको छु। बाँकी जीवन मोज गर। मैले पूरा गर्न नसकेका अधुरा काम अरुसँगै पूरा गर। आठै आश्चर्य हेर्ने, घुम्ने भोक मैले नै जगाई सकेको छु तिमी पनि सक्षम पनि छौ। लौ बधाई प्रिय।
यो ६र७ महिना बाहेक २८र३० वर्षको. तिमीसँगको सहयात्रा ज्यादै सुखद् नै रह्यो। यो ६र७ महिनाले मलाई गलायो किनकि मैले तिम्रो मायामा विस्वासघात पाएँ।
कुनै माध्यमले काम नगरेपछि बडो शरमका साथ यो मिडिया अपनाएँ माफ गर प्रिय। यदि कथंकदाचित म मरे भने मेरो काजक्रियामा तिमी र मेरो भाइ इमान सामेल नहुनु। यो मेरो बिन्ती !
कल्लाबारी माध्यमिक विद्यालयद्घारा आयोजित ‘शैक्षिक अन्तरक्रिया…….
विद्यालयले अभिभावकसित समेत समन्वय गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने....